Tag: gawaarida oo laga tago | Martech Zone
Tag: gaari ka tag
Sidee Websaydhkaaga gaabiska ahi u dhaawacayaa ganacsigaaga
Sannado ka hor, waxay ahayd inaan u guurno boggeena martigeliye cusub kadib markii martigaliyahayagu hadda bilaabay inuu si tartiib tartiib ah iyo gaabis ah u socdo. Qofna ma doonayo inuu beddelo shirkadaha martigelinaya… gaar ahaan qof martigelinaya websaydho badan. Tahriibku wuxuu noqon karaa geedi socod xanuun badan. Marka laga soo tago xawaaraha xawaaraha, Flywheel wuxuu bixiyay socdaal bilaash ah sidaa darteed waxay ahayd guul-guul. Ma aanan haysan ikhtiyaar, in kasta oo la siiyay in yar oo ka mid ah shaqada aan qabto inay tahay mid ku habboon bogagga
Waa maxay Hacking Growth? Waa kuwan 15 Farsamooyin
Jimco, Janaayo 15, 2021 Jimco, Janaayo 15, 2021 Douglas Karr
Ereyga jabsiga ereyga badanaa wuxuu leeyahay macno taban oo lala xiriiriyo maadaama loola jeedo barnaamij. Laakiin xitaa dadka khawano barnaamijyada had iyo jeer ma sameeyaan wax sharci darro ah ama waxyeello u geysanaya. Jabsigu mararka qaar waa shaqo ka shaqeynta ama toobiye. Dalbashada isla caqli gal u ah suuq-geynta sidoo kale way shaqaysaa. Taasi waa jabsiga koritaanka. Kordhinta kororka waxaa asal ahaan loo adeegsaday bilowga kuwaas oo u baahnaa in ay dhisaan wacyigelin iyo korsasho didn't laakiin ma aysan haysan miisaaniyadda suuqgeynta ama ilaha ay ku sameyn karaan.
Omnisend: Madal Si Fudud Loogu Isticmaali Karo E-commerce Email & Suuqgeynta Aaladda Gawaarida
Talaado, Disembar 29, 2020 Talaado, Janaayo 12, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah horumarka ugu xiisaha badan ee is-gaarsiinta suuq-geynta sannadkan, sidaan qabo, wuxuu ahaa horumarinta xalalka la awoodi karo si otomatig ahaan loogu suuq-geeyo suuq-geyntaada e-commerce. Nidaamyada otomatiga ee suuqgeynta dhaqameed waa in la isku daraa ka dibna olole kasta oo la horumariyo waqti ka dib - hirgelinta waxay qaadan kartaa toddobaadyo ama bilo kahor intaadan bilaabin inaad aragto dakhliga. Hadda, barnaamijyadan cusub ma ahan oo keliya is-dhexgal wax soo saar leh, waxay leeyihiin ololeyaal diyaar u ah inay bilaabaan isla markaaba
Isniin, November 30, 2020 Talaado, Disembar 1, 2020 Douglas Karr
Barmaamijka Maareynta Xiriirka Macaamiisha Ecommerce wuxuu abuuraa cilaaqaad wanaagsan oo u dhexeeya dukaamada ecommerce iyo macaamiishooda waayo-aragnimo xusuus leh oo horseedi doonta daacadnimo iyo dakhli. ECRM waxay xiraysaa awood ka badan tan Bixiyaha Adeegga Email (ESP) iyo macaamiil-diiradda ka badan madal Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM). Waa maxay ECRM? ECRMs waxay awood u siisaa milkiilayaasha dukaamada qadka inay hoos u dhigaan macmiil gaar ah — danahooda, iibsashadooda, iyo dabeecaddooda — kuna gaarsiiyaan qibrad macmiil shaqsi ahaaneed baaxad leh iyagoo adeegsanaya xogta macaamiisha la soo ururiyey ee marin kasta oo suuq geyn ah oo isku dhafan.
Sida loo Cabiro, Looga Fogaado, loona Yareeyo Qiimaha Ka Tagaya Dukaamada Sare
Khamiista, Oktoobar 22, 2020 Khamiista, Oktoobar 22, 2020 Douglas Karr
Marwalba waan layaabaa markaan la kulmo macmiil leh nidaamka lacag bixinta internetka iyo inta yar oo iyaga kamid ah ay runti isku dayeen inay wax ka iibsadaan degelkooda! Mid ka mid ah macaamiisheenna cusub wuxuu lahaa degel ay ku maalgeliyeen tan lacag ah waana 5 tallaabo oo looga baxo bogga guriga illaa gaadhiga wax iibsiga. Waa mucjiso qofkastaaba intaas ka gaadhayo! Waa maxay Ka Tagaya Dukaammada Dukaameysiga? Waa laga yaabaa